Xildhibaanno lagu dhaawacay Jowhar | KEYDMEDIA ENGLISH
Xildhibaanno lagu dhaawacay Jowhar
Magaaladda Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa xalay xili dambe, lagu dhaawacay xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka Hirshabelle.
JOWHAR, Soomaaliya - Maxamed Caabi Cali oo loo yaqaan (Maxamed Dheere) iyo Cabdiraxman Cabdi Iidow oo loo garan ogyahay (Kheyre), oo ah laba xildhibaan oo ka tirsan Baarlamaanka dowlad-goboleedka Hirshabelle, ayaa xalay lagu dhaawacay qarax miino oo ka dhacay bartamaha magaalada Jowhar.
Qaraxa oo dhacay abbaaro labadi habeennimo saqdii dhexe ee xalay, ayaa la rumeysan yahay in si gooni ah loola eegtay labada Xildhibaan, maadaama aysan xitaa saareyn gaari oo ay lugeynayeen, sida ay sheegayaan dad goobjoogayaal ah.
Sida wararku tibaaxayaan, qaraxa ayaa ka dhacay inta u dhaxeysa xarunta shirkadda biyaha ee Farjanno iyo saldhiga Booliska ee Xarunka dowlad goboleedka Hirshabeelle, xilli ay xildhibaannadu hoyaad u sii ahaayeen guryahooda.
Xalay, waxaa magaalada Jowhar, ka dhacday munaasabad loogu dabdaal-degayay sannad-guuradi shanaad ee kasoo wareegtay marki la yabyabay maamul goboleedka Hirshabelle, waxaana xalay magaalada laga dareemayay cariiri la xariira masuuliyiinta maamulka iyo kuwo heer Federaal oo buux-dhaafiyay Jowhar.
Labo maalin ayaa ka soo wareegtay, markii la soo gabagabeeyay doorashada Sideedda kursi ee Maamulkaasi ku leeyahay Golaha Aqalka sare ee Baarlamaanka JFS.
Billowgii bishii hore ayay ahayd, markii sidaan oo kale, Saddex xildhibaan oo ka tirsan Baarlamaanka Hirshabeele, lagu dhaawacay weerar banbaano, kuwaas oo kala ahaa Aadan Maxamed Muuse, Duwane Faarax Cali iyo Cismaan Cabdulaahi Dhoore.